(ULA)အဖွဲ့ဝင်များယာယီတည်းခိုနေသည့် အိမ်တစ်လုံးအား မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားသူများမှစီးနင်းဝင်ရောက်
အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များယာယီတည်းခိုနေသည့် အိမ်တစ်လုံးအား မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားသူများမှစီးနင်းဝင်ရောက်
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၆) ရက်၊ ဒေသစံတော်ချိန် (အိန္ဒိယ) နံနက်(၁) နာရီခန့်အချိန်တွင် မျက်နှာဖုံးစွပ်ဝတ်ဆင်ထားသောသူ (၇) ဦးသည် လုံတလိုင်( Lawngtlai) မြို့ရှိ နေအိမ်တစ်လုံးအား စီးနင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသူများသည် ၎င်းနေအိမ်တံခါးအားရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ကာ နေအိမ်အတွင်းရှိ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးသွားခြင်းခံခဲ့ရသူများ၏ ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ စာရွက်စာတမ်း နှင့် ငွေကြေးအချို့ကို သိမ်းဆည်းသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
၎င်းမျက်နှာဖုံးစွပ်(၇) ဦးထဲတွင် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) မှ အိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိ အာသံရိုင်ဖယ်( Assam Rifles-AR) အားသတင်းပေးနေသူ(၂) ဦး၊ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မြိတ်ဝစခန်းမှ (၂ သို့မဟုတ် ၃ ဦး) ၊ အာသံရိုင်ဖယ်မှ (၂ သို့မဟုတ် ၃ ဦး) ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကနဦးရရှိထားသော သတင်းများအရသိရှိရသည်။ ယခုဖြစ်စဉ်အားလက်ထောက်ချသော ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) မှသတင်းပေး(၂) ဦးမှာ ခိုင်အေးပိုင် ( Bahul) နှင့် တိုက်အောင် (Byat Ka) တို့ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံသောသတင်းရပ်ကွက်မှတဆင့်သိရှိရသည်။
ထို့အပြင် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) ဝင်ဖြစ်သော ခိုင်အေးပိုင် ( Bahul) နှင့် တိုက်အောင် (Byat Ka) တို့ သည် အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်၏ အိန္ဒိယဘက်အခြမ်းရှိ ရွာသစ်( Hmaungbuchuhh) ၊ တက်ပုချေ( JoShwah) နှင့် ကာကီ (KaKi) ရွာများမှ ရွာသူ/ရွာသားအချို့မှာရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ ရက္ခိုင့်တပ်တော် ( ULA/AA) နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောသတင်းပေးပို့မှုကြောင့် ၎င်းရွာသူရွာသားအချို့မှာ စိုးရိမ်စိတ်များစွာဖြင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်။
လုံတလိုင် (Lawngtlai) မှ ဖမ်းဆီးသွားသူများထဲမှ ကျော်ဝင်းနိုင် အား အာသံရိုင်ဖယ်(AS) မှမြန်မာနိုင်ငံဖက်အခြမ်းရှိ "မြိတ်ဝစခန်း"သို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၀) ရက်၊ နံနက်(၁၀) နာရီဝန်းကျင်တွင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ကျော်ဝင်းနိုင် ကိုလည်း ပြင်းထန်သောနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုမျိုးဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများထံမှတဆင့်သိရှိရသည်။
ထို့အပြင် လုံတလိုင် ( Lawngtlai ) နှင့် ဘုံတလင်ရွာ (Kamanh) အကြားတွင် ခြေ၊လက်၊ခန္ဓာ တို့အားပိုင်းဖြတ်ထားသော အမည်မသိလူသေအလောင်းတစ်လောင်း အားတွေ့ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့အနေဖြင့် သိရှိအောင်စုံစမ်းလျှက်ရှိပါသည်။
မိမိတို့ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် တရားမျှတမှုကိုလိုလားပြီး ယခုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်မျိုး နှင့် အပြုအမူများမှာ အိန္ဒိယ- ရခိုင်နယ်စပ်ရှိ ရခိုင်လူမျိုးများ၊ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများ၏ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုမျိုးကို မြင့်တက်စေပြီး နယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးနှင့် လူမျိုးရေးပြဿနာများဖြစ်လာမည်ကိုစိုးရိမ်မိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP) ၏ အထက်ပါကိစ္စရပ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိ/မရှိ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ရှင်းလင်းစွာသိလိုပါသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါက မိမိတို့အနေဖြင့် မည်သူ့မျက်နှာကိုမှထောက်ထားနေမည်မဟုတ်ဘဲ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိစေအပ်သည်။
At 1:00 am (India time), on6October 2019, seven armed masked persons broke down the entrance door ofahouse in Lawntlai Town, Mizoram, India and heldanumber of ULA/AA members under siege. The armed masked persons then abducted those ULA/AA members, and took documents,acomputer, some money and some phones from the house. We have received initial news that the seven or nine armed masked attackers consisted of ALP members and that two of them are informers for Assam Rifles-AR, two or three persons from Myaitwa Myanmar Army Station (Myanmar side of the India-Myanmar border) and two or three members of Assam Rifles-AR. The identities of two ALP members have been confirmed to be Khine Aye Pine (Rahul) and Taik Aung (Byat Ka). Furthermore, the ALP members, U Khine Aye Pine (Rahul) and Taik Aung (Byat Ka) have threatened several villagers from Hmaungbuchuhh, JoShwah, Kaki (in Assam, India) for having contacts with the ULA/AA. The villagers are now in hiding to due to serious safety concerns. The residents of Lawngtlai reported that one of the abducted AA/ULA members, Kyaw Won Naing, was seen to have been transferred to the Myanmar Army station in Myaitwa (Myanmar side of the India-Myanmar border) around 10:00 am on 10 October 2019. He was observed to have been severely tortured and wounded. There have also been reports that several body parts such as legs, hands, andatorso were found by the locals between Lawngtlai and Kamanh (in Mizoram). The identity of the deceased person is not yet known. The ULA/AA demands for justice to be upheld. This shocking and traumatic incident has raised anxiety amongst the vulnerable Rakhine indigenous populations along the India-Myanmar border. We are concerned that such armed attacks could lead to instability and racial conflicts along the India-Myanmar border. The ULA/AA seeks clarification from the ALP as to whether they were involved in the abduction, torture and killings of the abducted ULA/AA members. Should they be found to have been involved in these criminal acts, we will be taking appropriate measures to hold them accountable in accordance with international humanitarian law. ULA/AA Info Desk
အိန်ဒိယ-မွနျမာနယျစပျရှိ ရက်ခိုငျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျအဖှဲ့ဝငျမြားယာယီတညျးခိုနသေညျ့ အိမျတဈလုံးအားမကျြနှာဖုံးတပျဆငျထားသူမြားမှစီးနငျးဝငျရောကျ
၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ(၆) ရကျ၊ ဒသေစံတျောခြိနျ (အိန်ဒိယ) နံနကျ(၁) နာရီခနျ့အခြိနျတှငျ မကျြနှာဖုံးစှပျဝတျဆငျထားသောသူ (၇) ဦးသညျ လုံတလိုငျ( Lawngtlai) မွို့ရှိ နအေိမျတဈလုံးအား စီးနငျးဝငျရောကျခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးမကျြနှာဖုံးစှပျထားသူမြားသညျ ၎င်းငျးနအေိမျတံခါးအားရိုကျခြိုး ဖကျြဆီးဝငျရောကျကာ နအေိမျအတှငျးရှိ ရက်ခိုငျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ အဖှဲ့ဝငျအခြို့နှငျ့အတူ ဖမျးဆီးသှားခွငျးခံခဲ့ရသူမြား၏ ကှနျပြူတာ၊ ဖုနျး၊ စာရှကျစာတမျး နှငျ့ ငှကွေေးအခြို့ကို သိမျးဆညျးသှားခဲ့ကွောငျးသိရှိရသညျ။
၎င်းငျးမကျြနှာဖုံးစှပျ(၇) ဦးထဲတှငျ ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေးပါတီ (ALP) မှ အိန်ဒိယနယျစပျရှိ အာသံရိုငျဖယျ( Assam Rifles-AR) အားသတငျးပေးနသေူ(၂) ဦး၊ အိန်ဒိယ-မွနျမာနယျစပျရှိ မွိတျဝစခနျးမှ (၂ သို့မဟုတျ ၃ ဦး) ၊ အာသံရိုငျဖယျမှ (၂ သို့မဟုတျ ၃ ဦး) ဖွဈနိုငျကွောငျး ကနဦးရရှိထားသော သတငျးမြားအရသိရှိရသညျ။ ယခုဖွဈစဉျအားလကျထောကျခသြော ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေးပါတီ (ALP) မှသတငျးပေး(၂) ဦးမှာ ခိုငျအေးပိုငျ ( Bahul) နှငျ့ တိုကျအောငျ (Byat Ka) တို့ဖွဈကွောငျး ခိုငျလုံသောသတငျးရပျကှကျမှတဆငျ့သိရှိရသညျ။
ထို့အပွငျ ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေးပါတီ (ALP) ဝငျဖွဈသော ခိုငျအေးပိုငျ ( Bahul) နှငျ့ တိုကျအောငျ (Byat Ka) တို့ သညျ အိန်ဒိယ-မွနျမာနယျစပျ၏ အိန်ဒိယဘကျအခွမျးရှိ ရှာသဈ( Hmaungbuchuhh) ၊ တကျပုခြေ( JoShwah) နှငျ့ ကာကီ (KaKi) ရှာမြားမှ ရှာသူ/ရှာသားအခြို့မှာရက်ခိုငျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ/ ရက်ခိုငျ့တပျတျော ( ULA/AA) နှငျ့ဆကျစပျနသေညျဟူသောသတငျးပေးပို့မှုကွောငျ့ ၎င်းငျးရှာသူရှာသားအခြို့မှာ စိုးရိမျစိတျမြားစှာဖွငျ့ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနကွေရသညျ။
လုံတလိုငျ (Lawngtlai) မှ ဖမျးဆီးသှားသူမြားထဲမှ ကြျောဝငျးနိုငျ အား အာသံရိုငျဖယျ(AS) မှမွနျမာနိုငျငံဖကျအခွမျးရှိ "မွိတျဝစခနျး"သို့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ(၁၀) ရကျ၊ နံနကျ(၁၀) နာရီဝနျးကငျြတှငျလှဲပွောငျးပေးအပျလိုကျကွောငျးသိရှိရသညျ။ ကြျောဝငျးနိုငျ ကိုလညျး ပွငျးထနျသောနှိပျစကျညှဉျးပနျးမှုမြိုးဖွငျ့တှရှေိ့ခဲ့ရကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှတဆငျ့သိရှိရသညျ။
ထို့အပွငျ လုံတလိုငျ ( Lawngtlai ) နှငျ့ ဘုံတလငျရှာ (Kamanh) အကွားတှငျ ခွေ၊လကျ၊ခန်ဓာ တို့အားပိုငျးဖွတျထားသော အမညျမသိလူသအေလောငျးတဈလောငျး အားတှရှေိ့ကွောငျးသိရှိရသညျ။ မညျသူမညျဝါဖွဈကွောငျး မိမိတို့အနဖွေငျ့ သိရှိအောငျစုံစမျးလြှကျရှိပါသညျ။
မိမိတို့ရက်ခိုငျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ အနဖွေငျ့ တရားမြှတမှုကိုလိုလားပွီး ယခုကဲ့သို့သောလုပျရပျမြိုး နှငျ့ အပွုအမူမြားမှာ အိန်ဒိယ- ရခိုငျနယျစပျရှိ ရခိုငျလူမြိုးမြား၊ ရခိုငျမြိုးနှယျစုမြား၏ စိုးရိမျကွောကျလနျ့မှုမြိုးကို မွငျ့တကျစပွေီး နယျစပျတညျငွိမျရေးနှငျ့ လူမြိုးရေးပွဿနာမြားဖွဈလာမညျကိုစိုးရိမျမိပါသညျ။
ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေးပါတီ(ALP) ၏ အထကျပါကိစ်စရပျတှငျ ပါဝငျပတျသကျမှုရှိ/မရှိ မိမိတို့အဖှဲ့အစညျးအနဖွေငျ့ရှငျးလငျးစှာသိလိုပါသညျ။ ပါဝငျပတျသကျခဲ့ပါက မိမိတို့အနဖွေငျ့ မညျသူ့မကျြနှာကိုထောကျထားနမေညျမဟုတျဘဲ လုပျသငျ့လုပျထိုကျသညျမြားကို လုပျဆောငျသှားမညျဖွဈကွောငျးသိစအေပျသညျ။